ရေဝေးသုဿာန်ပြီးစီးခါစ တစ်နှစ်ကျော်အကြာက သွေးပျက်စရာ အဖြစ်အပျက် - APANNPYAY
Home / ပရလောကအကြောင်း / ရေဝေးသုဿာန်ပြီးစီးခါစ တစ်နှစ်ကျော်အကြာက သွေးပျက်စရာ အဖြစ်အပျက်
ရေဝေးသုဿာန်ပြီးစီးခါစ တစ်နှစ်ကျော်အကြာက သွေးပျက်စရာ အဖြစ်အပျက်
Apann Pyay 12:28 AM ပရလောကအကြောင်း Edit
ကျွန်တော်ရယ် ကျွန်တော့်ဦးလေးနဲ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း ခြောက်ယောက် ..စုစုပေါင်းရှစ်ယောက် အရက်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး သီချင်းတွေတီးမှူတ်နေရာကနေ အလာပ သလာပပြောရင်း နာနာဘာဝဝိနာဘာဝတွေ အကြောင်းကိုရောက်သွားပါတယ် ။
ယုံတဲ့သူကယုံသလို မယုံတဲ့သူက မယုံကြလေ တော့ အငြင်းအခုန်ဖြစ်လာကြပါတော့တယ် ။
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာ သရဲအလွန်ကြောက်တတ်တဲ့ သူရှိနေပါတယ် ။ သူကတော့ ဘေ့စ်ဂစ်တာတီးတဲ့ ကိုမြင့်ရွှေပါပဲ ။သရဲကြောက်တတ်ပေမယ့် မကြောက်ချင် ယောင်ဆောင်ပြီး စတင်စိန်ခေါ်သူကလဲ သူပါပဲ ။
" မင်းကစိန်ခေါ်တာလား မြင့်ရွှေ "
" စိန်ခေါ်တာတော့မဟုတ်ဖူး..မျက်လုံးနဲ့တပ်အပ်မြင်မှပဲယုံမယ်ဗျာ "
" ကောင်းပြီလေ..သားငယ်..သောက်စရာ စားစရာတွေ အကုန်ယူပြီး ကားပေါ်တင်လိုက်.. မယုံဘူးဆိုတဲ့ကောင် ကို လက်တွေ့ပြမယ် "
ကိုမြင့်ရွှေလဲကိုယ့်စကားနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ ဘာမှ မတတ်နိုင် တော့ပါဘူး ။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ လဲ ပါပလစ်ကာ ကားလေးပေါ် အရက်တွေ အမြည်းတွေ ဂစ်တာတွေတင်ပြီး ထွက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ် ။
အဲဒီအချိန်က ရေဝေးသုဿန်က မြေနီလမ်းကျဉ်းလေးပဲ ရှိပါသေးတယ် ။ အချိန်ကလဲ ညကိုးနာရီကျော်နေပါပြီ ။ ကားမောင်းဝင်လာရင်း ခေါင်းပြန်လှည့်ဖို့အတွက် မီးသင်္ဂြိုလ်စက်ကို ခေါင်းထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကား မီးရောင်ရှေ့မှာ မနက်မီးသင်္ဂြိုလ်မယ့် မဲလေးမသာ. ပိုင်ရှင်မဲ့ အလောင်းနှစ်ခုက လက်တွန်းလှည်းပေါ် ဆန့်ဆန့်ကြီး ရှိနေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ် ။ အဲဒီအခါမှပဲ ကိုမြင့်ရွှေတစ်ယောက် ထိတ်ထိတ်ပြာပြာ ဖြစ်ပြီး ကြောက်လန့်နေပါပြီ ။
ကားကိုပြန်လှည့်ပြီး လမ်းပေါ်ရပ်ရင်း ပါတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာမိတဲ့အခါ လူနေတဲ့အရိပ်အယောင် တောင် မတွေ့ရပဲ မြေပုံလေးတွေနဲ့တိတ်ဆိတ်နေပါတယ် ။
လမ်းလည်ခေါင်မှာနေရာယူပြီး ဝိုင်းဖွဲ့ကာ ခပ်လှမ်းလှမ်း မှ မြေပုံတစ်ခုအေါ်မှာ အရက်ပုလင်းနဲ့ ခွက်ကိုတင်ထား လိုက်ပါတယ်။ခြေလှမ်းသုံးလေးဆယ်လောက်သွားရတဲ့ မြေပုံပေါ်ကအရက်ကို သောက်ပြီးရင် အဖွဲ့စီ ပြန်လာရ ပါတယ် ။ ကိုမြင့်ရွှေမှာ ကြောက်ပေမယ့် အားတင်းထား ပုံရပါတယ် ။
တစ်ယောက်တစ်လဲအရက်သွားသောက်ကြရင်းနဲ့ ဂစ်တာတီးပြီးသီချင်းဆိုရတာ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အတွက် နားထောင်လို့ တီးလို့အရမ်းကောင်းပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ စပြီးစည်းဖောက်သူကတော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း ရစ်သမ်သမား ကျော်မိုးပါ ။တီးနေတဲ့ သီချင်း ကလဲ ဦးကျော်ဟိန်းရဲ့ ဒိုးရတော့မယ်အချစ်ရယ် ။ ဆိတ်ငြိမ်နေတဲ့အတွက် ဂစ်တာလေးလက်ရဲ့အသံက မြိုင်နေတာကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ lead တီးနေတဲ့ လက်တွေ က ဂစ်တာ flat board ပေါ်မှာပြေးလွှား နေပါပြီ ။
" ဟေး..သူငယ်ချင်းတို့..ပျော်ချင်ရင်လာကြ "
ရစ်သမ်တီးနေရာကနေထအော်လိုက်တဲ့ ကျော်မိုးရဲ့ စကားအဆုံးမှာပဲ ဦးငယ်လေးက ကျော်မိုးရဲ့ပါးကို ဖြတ်ရိုက်လိုက်ပါတော့တယ် "
သူ့စကားမှားသွားမှန်းသိသွားတဲ့အတွက် ပါးကိုပွတ်ပြီး စပ်ဖြဲဖြဲလုပ်နေတဲ့ကျော်မိုးရဲ့အနောက်မှာ ရုတ်တရက် ရောက်လာတာက အရိပ်မဲကြီးပါ ။
" ကျွီ..ကျွီ..ကျွီ..ကျွီ "
မထင်မှတ်တဲ့မြင်ကွင်းက ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါးစပ် ဟောင်းလောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ် ။ ပါပလေကာ ကားလေးက လူတွေဆွဲခိုနေသလို ယိမ်းထိုးနေပါပြီ ။
" ခွေးမသား..မင်းစည်းဖောက်တာတွေ့လား ..သားငယ်..ပြန်ကြမယ် "
အချိန်က ဆယ့်နှစ်နာရီထိုးပါတော့မယ် ။ ကောင်းကင်ပေါ်က လခြမ်းကွေးအရောင်ကမှိန်ပြပြ ။
" ဟာ..ဘုန်းကြီးကွ.. သုဿာန်ဓူတင်ဆောင်တယ်နဲ့ တူတယ်..ငါတို့ကြောင့်အနှေက်အယှက်ဖြစ်ရပြီ "
ခပ်လှမ်းလှမ်းက လာနေတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးကို ကျွန်တော်တို့ ရှစ်ယောက်စလုံးမြင်နေရပါတယ် ။ ပထမဆုံးစတွေ့သူက ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ Drumer ကိုဗန်ဆူးပါ ။
" အန်ကယ်တို့ဘာသာမှာ အဲ့ဒီလိုလဲရှိတယ်နော် "
" ရှိတာပေါ့ကွာ.. သုဿန်ဓူတင်ဆောင်တဲ့ ရဟန်းတွေ အများကြီးပေါ့ "
အဝါရောင်သင်္ကန်းနဲ့ရဟန်းတော်နီးလာတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေ လမ်းရှင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
ကြည့်နေရင်းကပဲ အရပ်ပုလာသလို အသက် နှစ်ဆယ်ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးပုံပေါက်လာပြီး ကုတ်အင်္ကျီအပြာရင့်ကိုလက်နှိူက်ကာ ကျွန်တော်တို့ ကြားထဲကဖြတ်သွားပါတော့တယ် ။ ကျွန်တော်တို့ နှာခေါင်းထဲမှာ စိမ်းရွှေရွှေ နနွင်းနံ့ကထောင်းထောင်း ထကျန်ခဲ့ပါတယ် ။
" ခြောက်ပြီဟေ့..အားလုံးတက်ကြ "
ဦးငယ်ရဲ့အော်ပြောလိုက်သံကြောင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးကားပေါ်ကိုပြေးတက်ရင်းစက်နှိူးလိုက်ပါတယ် ။
" မောင်းတော့သားငယ်..ဘာမြင်မြင်မရပ်နဲ့ "
ဦးငယ်လေးက နောက်ကနေလှမ်းအော်ပေမယ့် 1st ဂီယာထိုးပြီး လီဘာဘယ်လောက်နင်းနင်း ကားက ဘီးလိမ့်ရုံသာသာပဲသွားပါတယ် ။ ပစ်ကပ်ကားလေး ခမြာ ဝိတ်အရမ်းများလို့ ခေါင်းထောင်နေပါပြီ ။
ဦးငယ်က အကုန်ပြန်ဆင်းခိုင်းပြီး အမှားအယွင်းတွေ အတွက်တောင်းပန်သလို နံမည်ခေါ်ပြီးကားပေါ် တက်ခိုင်းပါတယ် ။
" ဗန်ဆူး..ဗန်ဆူးဘယ်ရောက်နေလဲ "
ကျွန်တော်လဲစိတ်ပူပြီး ကားမီးကြီးသာမက နှင်းကွဲမီး လေးလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကိုဗန်ဆူးကိုမြင်ရပါပြီ ။ ဓါတ်တိုင်နှစ်တိုင်အကွာမှာ တစ်ယောက်ထဲလမ်းလျှောက်နေတဲ့ ကိုဗန်ဆူး ။
" သားငယ်..မြန်မြန်မောင်းစမ်း "
ကားကိုလီဘာနင်းပေမယ့် အရင်လိုပေါ့ပေါ့ပါးပါး မဟုတ်ဖူးဆိုတာသတိထားမိပါတယ် ။ ကိုဗန်ဆူးအနား ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ကားကိုချက်ချင်းရပ်ပြီး သူ့ကို အတင်းဆွဲခေါ်ရပါတော့တယ် ။
" ဟေ့ကောင်.. မင်းဘာလို့တစ်ယောက်ထဲ လျှောက်သွားနေတာလဲ "
" အန်ကယ်ကလဲ.. စော်ကမိုက်တယ်ဗျ... ကျွန်တော်နဲ့ စကားတွေပြောနေတာ အဆင်ပြေနေပြီ "
" သူတောင်းစား..ဘယ်မှာလဲ အဲဒီဟာမ.. သေသေချာချာကြည့်စမ်း "
ကားမီးရောင်ထဲမှာ ဘာမှမတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ ကိုဗန်ဆူးတစ်ယောက် မျက်လုံးပြူးကျယ်သွားပါပြီ ။
" သားငယ်... သုနန္တာကရေကန်မှာရပ်.. ကားကို ရေဆေးမယ် ။ မင့်ညီမတွေက ငယ်သေးတော့ မကောင်းဘူး "
( သုနန္တာရေကန်မှာ ယခုအခါ ဓါတ်ဆီဆိုင်ဖြစ်နေပါပြီ )
သူငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ပို့ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာ တော့ ခေါင်မိုးပေါ်ကနေဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီး လျှောက်ပြေး သလို ကျွန်တော့်အခန်းကမှန်ပြူတင်းပေါက်ကို တဘုန်းဘုန်းနဲ့ထုပါတော့တယ် ။ ကျွန်တော့်အခန်းထဲမှာ လဲ ဆေးပြင်းလိပ်နံ့ နနွင်းနံ့တွေရနေပါတယ် ။
ဘေးအိမ်တွေပါလန့်နိုးရတဲ့အထိသောင်းကျန်းလွန်းတာ ကြောင့် ဖေဖေနဲ့မေမေပါနိုးလာခဲ့ပါတော့တယ် ။
ဖေဖေနဲ့မေမေ့ကိုအကြိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အခါ ဘဝ ခြားနေတဲ့ ပရလောကသားတွေကို စိန်မခေါ် သင့်ကြောင်း.. မနှောက်ယှက်သင့်တဲ့အကြောင်းပြောပြီး မေတ္တာသုတ်နဲ့ အာဋ္ဋာနာဋ္ဋိယပရိတ်တွေရွတ်ပြီး မေတ္တာပို့ပေးတာကြောင့် တောက်ခေါက်သံအကျယ်ကြီး ကြားရပြီး ငြိမ်သက်သွားပါတယ် ။
ဦးငယ်လေးကတော့ ကလေးတွေငယ်သေးတဲ့အတွက် အိမ်ထဲကိုကားမထည့်ပဲ အိမ်ရှေ့မှာပဲရပ်ပြီးအိပ်ပါတယ် ။ အဲဒီနေ့ကတော့ ကားပေါ်ကနေ ဆွဲချတဲ့အထိ ကြုံခဲ့ရ လို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပြေးပြီး ပရိတ်ရည်ဖြန်းရင်း အလှူ အတန်းလုပ် အမျှဝေခဲ့ရပါတယ် ။
ကိုမြင့်ရွှေ..ကိုဗန်ဆူးနှင့် မြင့်အောင်တို့ကဆုံးပါး သွား သော်လည်း ကျန်ရှိနေသေးသည့် ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကတော့ထိုသို့အပျော်အပျက်များကိုမလုပ်တော့ပါ ကြောင်း ။
ကြှနျတျောရယျ ကြှနျတေျာ့ဦးလေးနဲ့ ကြှနျတေျာ့ သူငယျခငျြး ခွောကျယောကျ ..စုစုပေါငျးရှဈယောကျ အရကျဝိုငျးဖှဲ့ပွီး သီခငျြးတှတေီးမှူတျနရောကနေ အလာပ သလာပပွောရငျး နာနာဘာဝဝိနာဘာဝတှေ အကွောငျးကိုရောကျသှားပါတယျ ။
ယုံတဲ့သူကယုံသလို မယုံတဲ့သူက မယုံကွလေ တော့ အငွငျးအခုနျဖွဈလာကွပါတော့တယျ ။
ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့ထဲမှာ သရဲအလှနျကွောကျတတျတဲ့ သူရှိနပေါတယျ ။ သူကတော့ ဘစျေ့ဂဈတာတီးတဲ့ ကိုမွငျ့ရှပေါပဲ ။သရဲကွောကျတတျပမေယျ့ မကွောကျခငျြ ယောငျဆောငျပွီး စတငျစိနျချေါသူကလဲ သူပါပဲ ။
" မငျးကစိနျချေါတာလား မွငျ့ရှေ "
" စိနျချေါတာတော့မဟုတျဖူး..မကျြလုံးနဲ့တပျအပျမွငျမှပဲယုံမယျဗြာ "
" ကောငျးပွီလေ..သားငယျ..သောကျစရာ စားစရာတှေ အကုနျယူပွီး ကားပျေါတငျလိုကျ.. မယုံဘူးဆိုတဲ့ကောငျ ကို လကျတှပွေ့မယျ "
ကိုမွငျ့ရှလေဲကိုယျ့စကားနဲ့ကိုယျဆိုတော့ ဘာမှ မတတျနိုငျ တော့ပါဘူး ။ ဒီလိုနဲ့ ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့ လဲ ပါပလဈကာ ကားလေးပျေါ အရကျတှေ အမွညျးတှေ ဂဈတာတှတေငျပွီး ထှကျလာခဲ့ကွပါတော့တယျ ။
အဲဒီအခြိနျက ရဝေေးသုဿနျက မွနေီလမျးကဉျြးလေးပဲ ရှိပါသေးတယျ ။ အခြိနျကလဲ ညကိုးနာရီကြျောနပေါပွီ ။ ကားမောငျးဝငျလာရငျး ခေါငျးပွနျလှညျ့ဖို့အတှကျ မီးသင်ျဂွိုလျစကျကို ခေါငျးထိုးလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ ကား မီးရောငျရှမှေ့ာ မနကျမီးသင်ျဂွိုလျမယျ့ မဲလေးမသာ. ပိုငျရှငျမဲ့ အလောငျးနှဈခုက လကျတှနျးလှညျးပျေါ ဆနျ့ဆနျ့ကွီး ရှိနတောတှလေို့ကျရပါတယျ ။ အဲဒီအခါမှပဲ ကိုမွငျ့ရှတေဈယောကျ ထိတျထိတျပွာပွာ ဖွဈပွီး ကွောကျလနျ့နပေါပွီ ။
ကားကိုပွနျလှညျ့ပွီး လမျးပျေါရပျရငျး ပါတျဝနျးကငျြကို လလေ့ာမိတဲ့အခါ လူနတေဲ့အရိပျအယောငျ တောငျ မတှရေ့ပဲ မွပေုံလေးတှနေဲ့တိတျဆိတျနပေါတယျ ။
လမျးလညျခေါငျမှာနရောယူပွီး ဝိုငျးဖှဲ့ကာ ခပျလှမျးလှမျး မှ မွပေုံတဈခုအျေါမှာ အရကျပုလငျးနဲ့ ခှကျကိုတငျထား လိုကျပါတယျ။ခွလှေမျးသုံးလေးဆယျလောကျသှားရတဲ့ မွပေုံပျေါကအရကျကို သောကျပွီးရငျ အဖှဲ့စီ ပွနျလာရ ပါတယျ ။ ကိုမွငျ့ရှမှော ကွောကျပမေယျ့ အားတငျးထား ပုံရပါတယျ ။
တဈယောကျတဈလဲအရကျသှားသောကျကွရငျးနဲ့ ဂဈတာတီးပွီးသီခငျြးဆိုရတာ တိတျဆိတျနတေဲ့အတှကျ နားထောငျလို့ တီးလို့အရမျးကောငျးပါတယျ ။ အဲဒီအခြိနျမှာ စပွီးစညျးဖောကျသူကတော့ ကြှနျတေျာ့ သူငယျခငျြး ရဈသမျသမား ကြျောမိုးပါ ။တီးနတေဲ့ သီခငျြး ကလဲ ဦးကြျောဟိနျးရဲ့ ဒိုးရတော့မယျအခဈြရယျ ။ ဆိတျငွိမျနတေဲ့အတှကျ ဂဈတာလေးလကျရဲ့အသံက မွိုငျနတောကွောငျ့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ lead တီးနတေဲ့ လကျတှေ က ဂဈတာ flat board ပျေါမှာပွေးလှား နပေါပွီ ။
" ဟေး..သူငယျခငျြးတို့..ပြျောခငျြရငျလာကွ "
" ဖွနျး "
ရဈသမျတီးနရောကနထေအျောလိုကျတဲ့ ကြျောမိုးရဲ့ စကားအဆုံးမှာပဲ ဦးငယျလေးက ကြျောမိုးရဲ့ပါးကို ဖွတျရိုကျလိုကျပါတော့တယျ "
သူ့စကားမှားသှားမှနျးသိသှားတဲ့အတှကျ ပါးကိုပှတျပွီး စပျဖွဲဖွဲလုပျနတေဲ့ကြျောမိုးရဲ့အနောကျမှာ ရုတျတရကျ ရောကျလာတာက အရိပျမဲကွီးပါ ။
" ကြှီ..ကြှီ..ကြှီ..ကြှီ "
မထငျမှတျတဲ့မွငျကှငျးက ကြှနျတျောတို့အားလုံးပါးစပျ ဟောငျးလောငျဖွဈသှားခဲ့ရပါတယျ ။ ပါပလကော ကားလေးက လူတှဆှေဲခိုနသေလို ယိမျးထိုးနပေါပွီ ။
" ခှေးမသား..မငျးစညျးဖောကျတာတှလေ့ား ..သားငယျ..ပွနျကွမယျ "
အခြိနျက ဆယျ့နှဈနာရီထိုးပါတော့မယျ ။ ကောငျးကငျပျေါက လခွမျးကှေးအရောငျကမှိနျပွပွ ။
" ဟာ..ဘုနျးကွီးကှ.. သုဿာနျဓူတငျဆောငျတယျနဲ့ တူတယျ..ငါတို့ကွောငျ့အနှကျေအယှကျဖွဈရပွီ "
ခပျလှမျးလှမျးက လာနတေဲ့ ရဟနျးတဈပါးကို ကြှနျတျောတို့ ရှဈယောကျစလုံးမွငျနရေပါတယျ ။ ပထမဆုံးစတှသေူ့က ခရဈယာနျဘာသာကိုးကှယျတဲ့ Drumer ကိုဗနျဆူးပါ ။
" အနျကယျတို့ဘာသာမှာ အဲ့ဒီလိုလဲရှိတယျနျော "
" ရှိတာပေါ့ကှာ.. သုဿနျဓူတငျဆောငျတဲ့ ရဟနျးတှေ အမြားကွီးပေါ့ "
အဝါရောငျသင်ျကနျးနဲ့ရဟနျးတျောနီးလာတာကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့တှေ လမျးရှငျးပေးလိုကျပါတယျ ။
ကွညျ့နရေငျးကပဲ အရပျပုလာသလို အသကျ နှဈဆယျကြျောအရှယျအမြိုးသမီးတဈဦးပုံပေါကျလာပွီး ကုတျအကငြ်္ီအပွာရငျ့ကိုလကျနှိူကျကာ ကြှနျတျောတို့ ကွားထဲကဖွတျသှားပါတော့တယျ ။ ကြှနျတျောတို့ နှာခေါငျးထဲမှာ စိမျးရှရှေေ နနှငျးနံ့ကထောငျးထောငျး ထကနျြခဲ့ပါတယျ ။
" ခွောကျပွီဟေ့..အားလုံးတကျကွ "
ဦးငယျရဲ့အျောပွောလိုကျသံကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့အားလုံးကားပျေါကိုပွေးတကျရငျးစကျနှိူးလိုကျပါတယျ ။
" မောငျးတော့သားငယျ..ဘာမွငျမွငျမရပျနဲ့ "
ဦးငယျလေးက နောကျကနလှေမျးအျောပမေယျ့ 1st ဂီယာထိုးပွီး လီဘာဘယျလောကျနငျးနငျး ကားက ဘီးလိမျ့ရုံသာသာပဲသှားပါတယျ ။ ပဈကပျကားလေး ခမွာ ဝိတျအရမျးမြားလို့ ခေါငျးထောငျနပေါပွီ ။
ဦးငယျက အကုနျပွနျဆငျးခိုငျးပွီး အမှားအယှငျးတှေ အတှကျတောငျးပနျသလို နံမညျချေါပွီးကားပျေါ တကျခိုငျးပါတယျ ။
" ဗနျဆူး..ဗနျဆူးဘယျရောကျနလေဲ "
ကြှနျတျောလဲစိတျပူပွီး ကားမီးကွီးသာမက နှငျးကှဲမီး လေးလုံးကိုတဈပွိုငျနကျထိုးလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ ကိုဗနျဆူးကိုမွငျရပါပွီ ။ ဓါတျတိုငျနှဈတိုငျအကှာမှာ တဈယောကျထဲလမျးလြှောကျနတေဲ့ ကိုဗနျဆူး ။
" သားငယျ..မွနျမွနျမောငျးစမျး "
ကားကိုလီဘာနငျးပမေယျ့ အရငျလိုပေါ့ပေါ့ပါးပါး မဟုတျဖူးဆိုတာသတိထားမိပါတယျ ။ ကိုဗနျဆူးအနား ရောကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ ကားကိုခကျြခငျြးရပျပွီး သူ့ကို အတငျးဆှဲချေါရပါတော့တယျ ။
" ဟကေ့ောငျ.. မငျးဘာလို့တဈယောကျထဲ လြှောကျသှားနတောလဲ "
" အနျကယျကလဲ.. စျောကမိုကျတယျဗြ... ကြှနျတျောနဲ့ စကားတှပွေောနတော အဆငျပွနေပွေီ "
" သူတောငျးစား..ဘယျမှာလဲ အဲဒီဟာမ.. သသေခြောခြာကွညျ့စမျး "
ကားမီးရောငျထဲမှာ ဘာမှမတှတေဲ့အခါမှာတော့ ကိုဗနျဆူးတဈယောကျ မကျြလုံးပွူးကယျြသှားပါပွီ ။
" သားငယျ... သုနန်တာကရကေနျမှာရပျ.. ကားကို ရဆေေးမယျ ။ မငျ့ညီမတှကေ ငယျသေးတော့ မကောငျးဘူး "
( သုနန်တာရကေနျမှာ ယခုအခါ ဓါတျဆီဆိုငျဖွဈနပေါပွီ )
သူငယျခငျြးတှကေိုပွနျပို့ပွီး အိမျပွနျရောကျတဲ့အခါမှာ တော့ ခေါငျမိုးပျေါကနဝေုနျးဒိုငျးကွဲပွီး လြှောကျပွေး သလို ကြှနျတေျာ့အခနျးကမှနျပွူတငျးပေါကျကို တဘုနျးဘုနျးနဲ့ထုပါတော့တယျ ။ ကြှနျတေျာ့အခနျးထဲမှာ လဲ ဆေးပွငျးလိပျနံ့ နနှငျးနံ့တှရေနပေါတယျ ။
ဘေးအိမျတှပေါလနျ့နိုးရတဲ့အထိသောငျးကနျြးလှနျးတာ ကွောငျ့ ဖဖေနေဲ့မမေပေါနိုးလာခဲ့ပါတော့တယျ ။
ဖဖေနေဲ့မမေကေို့အကွိုးအကွောငျးပွောပွတဲ့အခါ ဘဝ ခွားနတေဲ့ ပရလောကသားတှကေို စိနျမချေါ သငျ့ကွောငျး.. မနှောကျယှကျသငျ့တဲ့အကွောငျးပွောပွီး မတ်ေတာသုတျနဲ့ အာဋ်ဋာနာဋ်ဋိယပရိတျတှရှေတျပွီး မတ်ေတာပို့ပေးတာကွောငျ့ တောကျခေါကျသံအကယျြကွီး ကွားရပွီး ငွိမျသကျသှားပါတယျ ။
ဦးငယျလေးကတော့ ကလေးတှငေယျသေးတဲ့အတှကျ အိမျထဲကိုကားမထညျ့ပဲ အိမျရှမှေ့ာပဲရပျပွီးအိပျပါတယျ ။ အဲဒီနကေ့တော့ ကားပျေါကနေ ဆှဲခတြဲ့အထိ ကွုံခဲ့ရ လို့ ဘုနျးကွီးကြောငျးကိုပွေးပွီး ပရိတျရညျဖွနျးရငျး အလှူ အတနျးလုပျ အမြှဝခေဲ့ရပါတယျ ။
ကိုမွငျ့ရှေ..ကိုဗနျဆူးနှငျ့ မွငျ့အောငျတို့ကဆုံးပါး သှား သျောလညျး ကနျြရှိနသေေးသညျ့ ကြှနျတျောတို့အားလုံး ကတော့ထိုသို့အပြျောအပကျြမြားကိုမလုပျတော့ပါ ကွောငျး ။